Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO iyo Faahfaahinta Dagaaladii Ugu Dambeeyay oo Cadawga Lagu Jabiyay
Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO iyo Faahfaahinta Dagaaladii Ugu Dambeeyay oo Cadawga Lagu Jabiyay
Posted by ONA Admin	/ March 8, 2015
Wararkii ugu dambeeyay een ka helayno Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaalo dhowr ah oo ciidanka gumaysiga Itoobiya lagu jabiyay. Dagaaladan oo isugu jira weeraro iyo dahabagal ay CWXO ku beegsanayeen ciidanka cadawga ayaa waxaa cadawga lagaga dilay inta la hubsaday 34 askari oo darajooyin kala duwan lahaa iyo dhaawac badan oo goobaha dagaalka ay ka qaateen. Dagaalada aan helnay warbixintooda ayaa udhacay sidan.
2/3/15 Xagaray oo dagmada Dhagaxmadow ee Gobolka Jarar katirsan dagaal fool ka fool ah oo ay CWXO iyo kuwa daalan ee gumaysigu iskaga horyimaadeen waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 10 askari 15 kalana waa lagaga dhaawacay.
2/3/15 Dhaban-dawaco oo Tuulada Garigo’an ee Gobolka Nogob katirsan dagaal xoogan oo CWXO iyo kuwa wayaanaha ku dhex maray waxaa ciidankii cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
2/3/15 Leedilay oo Birqod katirsan dagaal aad u xoogan oo ay isku farasaareen soomajeestayaasha kuhowlan xoraynta Ogadenia iyo huubada uu gumaysigu marin habaabiyay waxaana ciidanka gumaysiga laga dilay inta lahubo 19 askari 23 kalana waa lagaga dhaawacay.
4/3/15 Qoolow oo Dagmada Xamaro ee Gobolka Nogob katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 5 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
5/3/15 Qayladhoore oo Xamaro karisan dagaal xoog leh oo CWXO iyo kuwa cadawga ku dhexmaray waxaa ciidanka wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare naf iyo maalba leh oo aan faahfaahintiisa lahaynin.